Gaarsiinta Koonfur-bari Aasiya
Suuqa Koonfur Bari waa suuq dhaqameed jiujiujiayi. alaabtu waa: Diesel Pump, Diesel Injector, Diesel Nozzle, Delivery Valve, Walxaha bamka Diesel iwm
Jiujiujiayi 2020 dib u eeg
2020 waa sanad gaar ah, shirkadda dhoofinta waxay la kulmaan caqabado daran.Jiujiujiayi ka faa'iidayso fursada oo aqbalo caqabadaha. duritaanka naaftada, bamka naaftada, biibiile tareenada caadiga ah, waalka kantaroolka duritaanka, iyo solenoid mudista . Qadarka iibka dhoofinta ayaa kor u kacay 15% marka loo eego 2019.
Jiujiujiayi ka qayb qaado bandhiga shabakada
Dec.9th Liaocheng Jiujiujiayi Precision Company Oo ay ku jiraan alaabtayada Naaftada Injectors, Naaftada injector bamka, Diesel Nozzle, Naaftada kontoroolka waalka, mudista solenoid v ...
Macmiilka Ruushka Booqo Shirkaddayada
by admin 20-06-04
2019.10.25th macaamiishani booqo warshadeena, wuxuu aad ugu qanacsan yahay qalabkayaga wax soo saarka. Sababtoo ah qalabkeena waa calaamadda ugu caansan adduunka oo dhan,waxaa intaa dheer waa daabacaadda ugu dambeysay.Sidaan waxaan ku hubin karnaa wax soo saarka saxda ah.Waxaan leenahay khubaro farsamo oo ugu xirfad badan Shiinaha. Ma aha oo kaliya in ay leeyihiin tayada sare, t...
Bahmueller oo loogu talagalay tuubbooyinka iyo qeexida waalka duritaanka 1
Qaybaha gaarka ah iyo astaamaha habka Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan gaarno: CIRBAD NOZZLE (Kursi & shiidid shiidid) CBN shiididda wakhtiyada wareegga giraangiraha <15s 2 dhexroor cabbirka madaxyada toosnaanta <0.3µm piezo tailstock dhexroorka roughnesses Ra <0.06µm pre-cabbirka. ..
Bahmueller oo loogu talagalay tuubbooyinka iyo qeexida waalka mudista 2
JIDHKA GUDAHA GUUD EE NOZZLE 2 station Twinner (2 unug wax lagu shiidi karo oo ku yaal hal mashiin) kala badh wakhtiga wareegga oo leh saami ahaan maalgashi hooseeya oo isku dhafan saldhiga hubinta cabbirka ee heerarka 4 ee qaabaynta iyo saxitaanka dhexroorka toosan barbar-dhig <1µm shiidi la qabsiga = osc...